Inona no jerena ao amin'ny firenena Andorra | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | Andorra, General
Andorra dia firenena manana fiandrianana fantatra amin'ny anarana hoe Lehibe Andorra, hita eo anelanelan'i Espana sy Frantsa. Io no microstate lehibe indrindra any Eropa ary toerana malaza mividy entana tsy misy haba. Fa ankoatran'ireny mampiavaka azy ireny dia tsy maintsy raisina fa toerana manolotra mpizahatany maro handany faran'ny herinandro na fialan-tsasatra lavitra.
Fantatra amin'izany i Andorra tontolon'ny natiora sy ny toeram-pilalaovana ski. Ity dia anisan'ny mahasarika azy, saingy mbola misy betsaka kokoa, hatrany amin'ny tanàna kely sy milay an-tendrombohitra ka hatrany amin'ny fananganana Romanesque, ny tanànany ary ny gara mafana. Betsaka ny zavatra tokony ho fantatra ao amin'ny firenena Andorra.
3 Seranan'i Ordino
5 Làlana mamakivaky ny Romanesque
6 Ski any Grandvalira
7 Tranombakoka ao Andorra
Ireo izay mankany amin'ny tanànan'i Andorra la Vella dia mazàna manao izany amin'ny fividianana karazana isan-karazany. Raha izany no tadiavintsika, na dia iray andro monja aza dia tsy maintsy mankanesa any amin'ny Mertixell Avenue, feno fivarotana isan-karazany. Etsy ankilany, ao an-tanàna dia tsy maintsy ahitanao ny sary sokitra nataon'i Dalí avy amin'ny andiam-famantaranandro miempo, azo fantarina, hita ao amin'ny Plaza de la Rotonda. Ao amin'ny foibe manan-tantara dia afaka mankafy ny gastronomie tsara indrindra ianao ary La Birrería, toerana iray ho an'ireo mpitia labiera.
Este spa spa no lehibe indrindra any Eropa ary toerana hialana sasatra. Manana manintona maro ho an'ireo izay te-hiala amin'ny adin-tsaina. Izy io dia manana lagoon ivelany misy rano mafana amin'ny 32ºC, lagoon anatiny, jacuzzi, fandriana bubble, hydromassage na sarontava-drano misy etona. Anisan'izany ny efitrano fanatanjahan-tena, fandroana Sirocco, hamama, efitrano fialan-tsasatra na Jacuzzi any ivelany. Ny habetsaky ny zavatra hatao ao amin'ity foibe ity dia hampifaly antsika mandritra ny andro maromaro. Ny tombony lehibe dia ny fahafahantsika miala sasatra be rehefa manohy ny fitsidihantsika isika.
Manomboka amin'ny tanànan'i Canillo dia azonao atao ny mahatratra ny Port of Ordino, faritra voajanahary tsara tarehy hankafizanao ny tsara indrindra ao Andorra, ireo zaridaina ao aminy. Amin'ny lalana mankany ambony dia tsy maintsy mijanona eo amin'ny Fomba fijery Roc del Quer, izay sehatra mihantona. Rehefa tonga eo an-tampon'ny seranana ianao dia afaka mankafy ny fomba fijerin'ny tampon'ny Andorra. Tsy isalasalana fa teboka tena ilaina eto amin'ity firenena ity.
Ny Sanctuary an'ny Our Senyora de Meritxell dia ao amin'ny tanànan'i Meritxell. Ny fitoerana masina dia vita amin'ny fananganana maro. Manisa isa fitoerana masina vaovao, fiangonana fomba romana taloha ary ny làlan'ny mpanjaka misy oratorie sy fitsangantsanganana an-tsambo. Ity no fitoerana masina manan-danja indrindra amin'ny Andorra rehetra. Ao amin'ny trano fiangonana ianao dia afaka mahita ny fampirantiana Meritxell Mermòria, izay mifandraika amin'ny fanoloran-tena ho an'ity olo-masina mpiaro ny vahoaka Andoritana ity.
Làlana mamakivaky ny Romanesque
Miresaka làlana mamakivaky ny Romanesque izahay satria any Andorra dia misy fiangonana marobe izay voatahiry amin'ity vanim-potoana kanto ity, na dia misy aza manandanja kokoa noho ny sasany. Anisan'izany, ny fiangonana talohan'i Romanesque any Santa Coloma dia niavaka, izay nitarina tamin'ny taonjato faha-XNUMX niaraka tamin'ny tilikambo lakolosy boribory Lombard. Ny fiangonan'ny Sant Joan de Caselles any Canillo trano fivavahana hafa mahaliana azy io. Tamin'ny taonjato faha-XNUMX izy io ary manana tilikambo lakolosy miendrika Lombard koa, mahitsizoro amin'ity tranga ity, toy ny mahazatra. Ny fiangonana hafa hitsidika azy dia i Sant Martí de la Cortinada, Sant Cerni de Nagol na i Santi Climent de Pal.
Ski any Grandvalira
Ny Resort ski Grandvalira no zava-dehibe indrindra ao Andorra. Ao anatin'izany no ahafahanao mankafy ny lemaka kilometatra sy hetsika maro. Misy sekoly ski amin'ny sokajin-taona rehetra ary afaka manao zavatra hafa koa ianao. Koa satria miangona miaraka am alika handeha amin'ny snowshoes na snowmobiles. Aza adino ny mahazo ny pasiteranao amin'ny vanim-potoana ski.
Tranombakoka ao Andorra
Raha ny tadiavintsika dia làlana mitady hetsika ara-kolontsaina kely, ao Andorra koa dia misy tranombakoka maro izay mety hahaliana. ny Tranombakoka nasionaly momba ny fiara ao Encamp Manana ny karazan-fiara rehetra izy, izay mampiseho ny fivoarana nolalovany rehefa nandeha ny fotoana. Ny fanangonana azy dia iray amin'ireo zava-dehibe indrindra any Eropa, noho izany ny fahalianany lehibe. Ny Museum of Sacred Art dia manana zavatra litorjia isan-karazany miaraka amina kojakoja, lamba ary taratasy. Ny tranom-bakoka Casa Cristo Ethnographic Museum, ao Encamp ihany koa, dia toerana mahaliana hianarana momba ny fiainana mahazatra an'ny trano Andorran nandritra ny taonjato faha-XNUMX. Toerana iray hafa mampiavaka azy ny Museum of Miniature nataon'i Nicolai Siadistry, miaraka amin'ny fanangonana microminiature. Betsaka ny tranombakoka hafa mety mahaliana, arakaraka ny lohahevitra tiantsika, toy ny Comic Museum, ny môtô môtô, ny tranom-bakoka, ny tranom-bakoka Perfume na ny Museum Museum.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Inona no jerena ao Andorra
Zohy an'ny Zugarramurdi, harena ao Navarra